Waxgaradka Koonfurta Hargeysa Oo Xaflad Balaadhan Ku soo dhaweeyay Wasiirrada cusub | Salaan Media
Hargeysa (SM)Xaflad ballaadhan oo hadhimo sharafeed ahayd, laguna soo dhaweynayay Wasiirrada cusub ee dhawaan Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo xilka u magacaabay, kuwaas oo uu hoggaaminaayay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigalinta Somaliland Mudane Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa lagu qabtay Huteelka Ambassador ee Magaaladda Hargaysa. Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen Beesha Koonfurta Hargaysa.
Ugu horreyn Suldaanka guud ee Beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo munaasibadas ka hadlay, ayaa sheegay in deegaanka uu Suldaanka u yahay ay soo dhaweynayaan isku shaandheynta uu Madaxweynaha Somaliland ku sameeyay todobaadkii hore Golihii Wasiirrada.
Suldaan Maxamed wuxuu bulshada kula dardaarmay in aanay Xukuumadda uun waxba ka sugin maadaama oo dhaqaalaheenu kooban yahay, waxaanu yidhi . “Waan soo dhaweynaynaa labada Wasiir ee Madaxweynuhu u magacaabay,beeshayadda, waxaanan leenahay sadkan hana loo kordhiyo.”ayuu yidhi Suldaan Maxamed Cabdiqaadir.
Waxaa iyaguna Munaasibaas ka hadlay, Wasiirro tirobadan oo ay ahayeen. Wasiirradda Wasaaradaha, Cadaalada, Caafimaadka, Shaqada iyo arrimaha bulshadda, , Madaxtooyadda, Arrimaha gudaha iyo Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo Wacygalinta.
Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Mudane Xirisi Cali Xaji Xasan oo hadal kooban oo kaftan ah halkaas ka jeediyay, ayaa yidh. “Runtii waxay cadayeen beesha Degaankani inay yihiin Boqortooyaddii, waxaan leeyahay Wasiir Cali Warancadde iyo Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi idinkana waa laydinka fadhiyaa.”
Dhinaca kale Waxaa isna halkaas ka hadlay Guddoomiyaha Xisbiga tallada haya ee Kulmiye Md. Muuse Biixi Cabdi, oo u mahad naqay odayaashii xafladaas soo agaasimay sidoo kale wuxuu soo dhaweeyay Wasiirrada cusub iyo kuwa laysku badalayba.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo munasibaad soo gabo-gabeeyay ayaa u mahad-naqay duqaydii soo abaabushay xafladaas. Isagoo sidoo kale ka codsaday bulshada inay xilka ugu duceeyaan.